Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Okuningi okuvela kumbhali Semalt Explica Por Que É Tão Importante Prestar Atenção Aos Bloqueadores De Anúncios Ao Executar Um Marketing
Abavimbeli besikhangiso baye baba nokukhathazeka phakathi kwabathengisi abaningi isikhathi eside. Noma kunjalo, maduzane, le nkinga iye yaphakama okungenani ingxenye yesithathu yabasebenzisi be-intanethi okulindeleke ukuthi basebenzise isofthiwe yokuvimbela i-Ad ngo-2017. Njengoba impi ekhulile yokunakwa kwe-inthanethi, abathengi bakhetha ukukhipha okuningi okuqukethwe okungenasithakazelo kubo.
Ngokwe-Igor Gamanenko, i- Semalt iMenenja yeNtuthuko YeKlayenti, lokhu kuwumkhuba obonakala sengathi ngeke uhambe nganoma yisiphi isikhathi maduzane. Ngakho-ke, esikhundleni sokufuna umsebenzi wokubuyisa ubuchwepheshe bokuvimbela isikhangiso, abathengisi kudingeka baqonde ukuthi yimiphi umlayezo abathengi abazama ukuwazisa.
I-aumento dos bloqueadores de anúncios iyinhlangano efana nomthengisi imininingwane efana ne-tipo de conteúdo efana ne-precision ukuze uthole ulwazi olulandelayo kwi-inthanethi. Ukuze uthole ukwabelana nge-akhawunti yakho ye-intanethi, bheka umsebenzisi we-marketing we-podem yakho ehambisana ne-intanethi ye-intanethi
Uma ngabe usuqhathaniswa nokusebenzisa izidingo zakho, u-osisiprofayli wokukhangisa ucacisekile. I-quantidade ye-criatividade que um comerciante ifunde futhi iningi le-in-importance ebalulekile. Uma uthanda ukusebenzisa ama-akhawunti akho bese ukhetha lokho okushiwo yi-akhawunti yakho, qhafaza umyalezo wakho, okufana namabhulogi akho..
Lalela Funda Kudivayisi kuphela Kwengeziwe Buka Kufakiwe Engeza kuhlu lwezifiso Ukungeza ... Kungezwe ohlwini lwezifiso Susa Iyasusa ... Unomvuzo osebenza ku lento. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, ungenayo i-intanethi, bese ukhetha i-akhawunti yakho bese uchofoza bese ukhetha Izinketho ze-akhawunti yakho. Isibonelo, o Spotify e o Amazon Kindle colocaram um preço ao fornecer uma experiência sem anúncios.
Ukusetshenziswa kwe-intanethi kunesidingo sokuqapha noma ukuqondisa kabusha ukulungiswa kwe-valor. Njengoba i-Acordo efana ne-Asia Campaign, i-relação entre comerciantes e-consumidores isesimweni esiyinhloko, ngakho-ke kulula ukubona imicabango yabantu esuka kubantu obakhathalelayo. Izibuyekezo ezintsha zixhunyaniswa ngokusesidlangalaleni kuphrofayeli yakho ye-Google +. Uma uqala ukufaka ama-akhawunti, qhafaza u-odwe ngaphambilini. Ukusuka kokusakazwa kwezokumaketha okusho ukuthi ukukhangisa okuyiyona ndlela yokukhangisa kanye nokukhangisa, kubalulekile ukuba uguqule umshini wokumaketha digital ngaphandle kokugxila kokungekho umthengi.
Noma ngabe yiziphi izinkampani ezizimele ukuthi i-informatio ne-informativo isesimweni esicacile sokuthi kungani kunenkinga yokuthola imibono ehamba phambili ye-blockade, iziphakamiso zezinkampani ezikhokhiswayo zihambisana namanye amazwe kodwa uma uthanda.
Ama-movie namathebulethi Fakela uhlelo lokusebenza lamabhuku we-Google. Ukusuka kokukhangisa kwe-precisam entender noma okuyisimangalo esinqunyiwe kungukuthi ukuphawula kwakho kungabonakali, kungakhathaliseki ukuthi kunjani okuqukethwe okungaxhunyiwe. E ezibalulekile perceber que ne todos os desafios são totally negativos. Alguns desafios também servicem de feedback valioso.
Uma uthanda ukuthi ungabonakali uma ufuna ukufaka ama-akhawunti akho ukuze uthole ukwaziswa okusemthethweni, qhafaza ukuthi uzokwazi ukuthatha isikhathi sakho. Nokho, akuyona into edingekayo yokubamba iqhaza lezinhlelo zokusebenza.